९८ वर्षीय शताब्दी पुरुष जोशीले सबैलाई हँसाए ! – Himal Post | Online News Revolution
९८ वर्षीय शताब्दी पुरुष जोशीले सबैलाई हँसाए !
himal post २०७४, २० चैत्र ०६:३२ April 3, 2018
ललितपुर – शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीले उनकै सम्मानका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सोमबार सबैलाई हँसाए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार छापिएको छ ।
अवैध कलेजमा पाँच वर्षदेखि पढाइ: अन्योलमा विद्यार्थीको भविष्य
भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन संसदलाई सम्बोधन गर्दै ओली